Enweghị mmachi: Russia na -amaliteghachi ụgbọ elu ya na Dominican Republic, Czech Republic na South Korea
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Enweghị mmachi: Russia na -amaliteghachi ụgbọ elu ya na Dominican Republic, Czech Republic na South Korea
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'agbanyeghị mmachibido nke mmachi niile, ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ụgbọ elu Russia ma ọ bụ mba ofesi kọrọ ụgbọ elu ndị ọzọ emepere na Russia na mba ndị ahụ.
Dominican Republic, Czech Republic na South Korea bụ mba atọ mbụ, nke Russia maliteghachiri ụgbọ elu ya kpamkpam.
Ọ bụ Rossiya si St. Petersburg, na Aeroflot na Czech Airlines si Moscow na -eme ụgbọ elu na Prague.
Emepere ụgbọ elu na Dominican Republic n'August, ebe naanị Azur Air na -eme ụgbọ elu ụgbọ elu ebe ahụ.
Ndị isi ụgbọ elu Russia na etiti nsogbu mgbochi coronavirus kwupụtara na ebulila mmachi niile dị na ụgbọ elu na Dominican Republic, South Korea na Czech Republic malite na Fraịde, Ọgọst 27.
Dominican Republic, Czech Republic na South Korea bụ mba atọ mbụ, nke Russia maliteghachiri ụgbọ elu n'ụzọ zuru oke kemgbe amachibidoro mmachibido iwu n'etiti ọrịa, mba ndị fọdụrụ ka nwere usoro nhazi oke ụgbọ elu. Ọzọkwa, etiti ahụ ekpebiela ịbawanye oke maka ụgbọ elu na -aga Egypt oge niile malite na Fraịde.
Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ụgbọ elu Russia ma ọ bụ onye si mba ọzọ kọrọ akụkọ ụgbọ elu ndị ọzọ emepere na mba ndị ahụ. A na -eme ụgbọ elu na Prague Rossiya si St. Petersburg, na Aeroflot na ụgbọ elu Czech si Moscow. Czech Republic ka mechiri maka ndị njem n'ihi na naanị ndị njem nwere ikike ịbụ nwa amaala ma ọ bụ ikike obibi, ma ọ bụ ndị bịarutere maka ọmụmụ ma ọ bụ ọgwụgwọ nwere ike ịbanye na mba ahụ.
Emechikwara South Korea maka ndị njem. Ndị niile na -abanye obodo (naanị ụmụ amaala ma ọ bụ ndị njem nwere ikike obibi) ka a ga -achọpụ iche maka ụbọchị 14. Ọzọkwa, n'ọnwa Eprel gara aga, mba ahụ hapụrụ njem njem visa na Russia ma kwụsịtụ inye visa. Naanị Aeroflot na -eme ụgbọ elu na mba ahụ.
Emepere ụgbọ elu na Dominican Republic n'August, ebe naanị Azur Air na -eme ụgbọ elu ụgbọ elu ebe ahụ. Aeroflot ekwupụtakwala mmasị na ebe ọ na -aga, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ekwuputabeghị ụbọchị mmalite ụgbọ elu.
Belavia ụgbọ elu nke igwe na-adaghị adaba na-eme ihe mberede ...
Mgbakọ Kwa Afọ nke IATO A na -edobe ya na Disemba na…
A nwalere Seychelles site na ijiri nri maka Goût de ...
Naanị 10% n'ime otu ijeri ụgbọ ala nwere nchekwa
Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa gwara Air France, anyị hụrụ gị n'anya!
Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka na ndị nnọchi anya ya ugbu a ...
Marriott na Mission na ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na India ...
Spain na Saudi Arabia na -ahụ ụzọ na -aga n'ihu maka UNWTO
Qatar Airways na RwandAir na -ekwupụta nkwekọrịta njikọta
Obi nke Mmemme Mmụta America IMEX
World Tourism Network Bangladesh Isi ndu ...
Kitts & Nevis: Enweghị oke na ọnụọgụ nke ...
Ụgbọ elu si Sharm el-Sheikh na Moscow Domodedovo ...
Ọrịa Cancer Mbụ: Kedu ka Verzenio nwere ike isi nyere aka?
Etu ị ga -esi nweta akara ugo mmụta gị dị ka onye nomba dijitalụ
Ngalaba njem nlegharị anya Jamaica na -anya ike akụ na ụba ...
New York City na-eme ka ọgwụ mgbochi COVID-19 bụrụ iwu maka mmadụ niile…
Expedia hụrụ uto dị egwu maka Jamaica